အမေရိကန်မော်ကွန်း - ထို rayhab
ရုရှားဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် Yuriy Borisov သူတို့ကကျူးဘားအစိုးရနှင့်အတူရထားလမ်း၏ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံများအတွက်စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြကြေညာခဲ့သည်။ ကျူးဘားကျူးဘားမော်စကိုမှာရှိတဲ့မီးရထား၏သက်တမ်းတိုးတခုတခုအပေါ်မှာသဘောတူညီမှုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ရုရှားဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် Yuriy Borisov စိန့် စိန့်ပီတာစဘတ်နိုင်ငံတကာဖိုရမ်တစ်ကြေညာချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ် [ပို ... ]
min တွေးတောဆင်ခွင်တာတွေတံတားဒီဇိုင်းတိုးပွား Reality?
ခေတ်မီတံတားဆောက်လုပ်ရေးမယုံနိုင်လောက်အောင်စိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်ထူးခြားသောနိုင်ပါတယ်။ ယခုအချိန်အထိအင်ဂျင်နီယာ, စဉ်ဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် 21 ၏ဤအဆင့်အထိ ပတ်သက်. စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရာတစျခု။ ရာစုနှစ်အရှိဆုံးအံ့သြဖွယ်တံတားရောင်ပြန်ဟပ်မှု၏အချို့။ ထို့အပြင် ပို. စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် [ပို ... ]
Bombardier သူကားအဘယ်သူအားဖြင့်သာတည်? သူဘယ်လိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ခဲ့တာလဲ
Bombardier Inc ကို, ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးမီးရထားစီးပွားဖြစ်နှင့်ပုဂ္ဂလိကလေယာဉ်တင်ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ Montreal တွင်တည်ရှိသောကုမ္ပဏီ၏ Center ကတည်ထောင်သူ, ယောသပ် Armand Bombardier, ပထမဦးဆုံးစီးပွားဖြစ်အမြတ်အင်ဂျင်တီထွင်သူတစ်ဦးစက်မှုအင်ဂျင်နီယာ။ အဆိုပါ 19342Bombardier နှစ်အရွယ်သားအတွက် [ပို ... ]
နယူးယောက်, ယူအက်စ်အေ, ဂျာမနီ, ဘာလင်, လန်ဒန်နှင့်အမ်စတာဒမ်, အင်္ဂလန်အတွက်နယ်သာလန်မြို့တော်အအေးပိုင်းလေထုရှိနေသော်လည်း '' သင့်ရဲ့ဘောင်းဘီမြေအောက်ခရီး '(အဘယ်သူမျှမဘောင်းဘီမြေအောက်ရထားစီးနင်) xnumx'inci ဖြစ်ရပ်သည်ယခုနှစ်ကျင်းပခဲ့သည်။ ဒီနှစ်ဖြစ်ရပ်များများစွာအတွက်ကမ္ဘာကြီးအနှံ့ပြန့်နှံ့ [ပို ... ]
ကမ္ဘာ့အများစုမှာအရေးကြီးလေကြောင်း၏ BCCI အဖွဲ့ဝင်များနှင့်လေကြောင်းဆိုင်ရာရေးစင်တာ
Bursa ကုန်သည်ကြီးများနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ဝင်များကိုအမေရိကန်ခရီးစဉ်သည်အတွက်နာဆာရဲ့ကနေဒီအာကာသအခြေစိုက်စခန်း၏နယ်ပယ်အတွင်းအသုံးပြုရန်အားလုံးကိုလူလိုက်ပါသောအာကာသလေယာဉ်အာကာသဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအပေါ်ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး, သူသည် Embry ပုစ္ဆာလေကြောင်းတက္ကသိုလ်သွားရောက်ခဲ့သည်။ BCCI ARPA NET နောက်ပိုင်းမှာအာကာသ [ပို ... ]
တူရကီ F-Vision ၏ထုတ်လုပ်မှု 100 ရာခိုင်နှုန်းကို
Sancaktepe အတွက် Ford ကား Otosan ကုမ္ပဏီကြီး R & D စင်တာတူရကီအင်ဂျင်နီယာများ44 လအတွင်းကဒီဇိုင်းနှင့်တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ အဆငျ့, ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမောင်းနှင်မှု '' က F-Vision ၏ '' နှင့်အတူပထမဦးဆုံးလျှပ်စစ်ထရပ်ကားလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ကိုပြင်းစွာမှုတ်ဆောင်ခဲ့တော်မူပြီ။ Ford ကား Otosan နှင့်လျှပ်စစ် 100 ရာခိုင်နှုန်းကို [ပို ... ]
အမေရိကန်ရထားအတူတူ 38 Input Output ကားများလွဲချော်ရပ်တန့်
ယူနိုက်တက်စတိတ်ရထားမတော်တဆမှုအိုင်အိုဝါပြည်နယ်အတွင်းရှိဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အဆိုပါ 38 ခုနှစ်တွင်လှည်းရထားစုဝေးရောက်လာကြ၏လွဲချော်ရပ်တန့်။ အိုင်အိုဝါအမေရိကန်ပြည်နယ်မြစ်ကနေတံတားဖြတ်ကျော်လွဲသွားကုန်တင်ရထားခဲ့ပါတယ်။ စက်မှုဝန်-ဆောင်သောသဲနဲ့ပဲပုပ်ရေနံ [ပို ... ]
နယူးယောက်မြို့ရဲ့နယူးသင်္ကေတ Tram လိမ့်မည်
ကြောင့်ရထားလမ်းစနစ်ဖြင့်နယူးယောက်မက်ထရိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ကြုံတွေ့မိုးသည်းထန်စွာပြတ်တောက်ဖို့မြို့ပြအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ကြုံတွေ့နေရသောပြဿနာများကိုဖယ်ရှားပစ်လိမ့်မည်။ နယူးယောက်မြို့တော်ဝန်ဘီလ်က de Blasio ရဲ့ကလမ်းရထားစီမံကိန်းအားတစ်ဦးနှစ်နှစ်ဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာမှု (BQX Streetcar) ပြီးစီးလုယူ [ပို ... ]
hit သောရထားပေါ်တွင်ခရီးသွားဧည့်တင်ဆောင်တဲ့ရထား၏အရှေ့ဘက်အနီးပီရူးအတွက်စာနယ်ဇင်း, မာချူပီချူရဲတပ်ဖွဲ့အရာရှိများအတွက်အစီရင်ခံစာများအဆိုအရသူသည်မတော်တဆမှုအတွက် 23 ကလူဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ အခင်းဖြစ်ပွားရာမှဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့များပေးပို့ခြင်းသောအခါ, မတော်တဆထိခိုက်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးစတင်ခဲ့သည်။ ပီရူးအတွက်အင်ကာယဉ်ကျေးမှု [ပို ... ]
တက်စလာ, SpaceX CEO ဖြစ်သူ Elon Musk နဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏ကုမ္ပဏီ, Los Angeles မြို့မှာရှိတဲ့အသွားအလာပြဿနာအဆုံးသတ်ထားမည်သောအရူးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းများနှင့် ပတ်သက်. မိန့်မြွက်တော်မူ၏။ Iron Man ရဲ့အစစ်အမှန်ဘဝအဆုံး Musk သည်အထိစပြီးထိုက်တန်ပါတယ်, စီမံကိန်းမကြာသေးမီနှစ်များတွင်အများဆုံးအာရုံကိုဆွဲဆောင် [ပို ... ]
ကာဇက်စတန်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Nursultan Nazarbayev, အမေရိကန်, ကက်စပီယန်ပင်လယ်နှင့်အာဖဂန်နစ္စတန်အပေါ် Aktau, အထူးကုန်တင် Kuria ဆိပ်ကမ်းကျော်အောင်ရှိလာသည့် protocol ကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။ သတင်းစာ Pravda Kazahstanskaya အတွက်အစီရင်ခံစာသမ္မတ Nazarbayev "အမေရိကန်နှင့်ကာဇက်စတန်တို့အကြားအထူးကုန်တင်၏စီးပွားဖြစ်ရထားလမ်းအဆိုအရ [ပို ... ]
Vatmansızဓါတ်ရထားစီမံကိန်း sanko'l ၏ကျောင်းသားများများအတွက်ချီးမြှင့်
ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့သုံးလောကီသားတို့သည်အ Sanko High School တွင်ကျောင်းသားများ၏ဒုတိယမှာ "ROBOGAMES 2018 ကမ္ဘာ့ဖလားစက်ရုပ်ပြိုင်ပွဲ" ၌ကျင်းပသည့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု, ကမ္ဘာတတိယဒီဂရီရရှိသဖြင့်အဓိကအောင်မြင်မှုသွင်းယူပေးခဲ့သည်။ အတူတူယှဉ်ပြိုင်မှုအတွက် Sanko High School တွင်ကျောင်းသားများကိုပြီးခဲ့သည့်နှစ်က [ပို ... ]
အဲဒီမှာကိုလည်းနှုတ်ဆက်များနှင့်အစည်းအဝေးအချိန်လေး၏အနီးကပ်ဆုံးသက်သေကြက်သရေရထားဘူတာ ... နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလူတွေထောင်ပေါင်းများစွာ၏ကြိုဆိုဤတွင် ... ခေါင်မိုးပေါ်သောဧရာမနာရီကိုတစ်ဦးမီးရထားဘူတာရုံ၏အတွေးအတွက်မော်စကိုမော်စကို / ရုရှားနိုင်ငံ Yaroslavsky ဘူတာလိပ်နေထိုင်နေကြ [ပို ... ]
အဆိုပါ 800 မဂ္ဂါဝပ် ABB ပါဝါစင်တာကိုအင်ဗာတာ PVS2 ခုနှစ်တွင် Now ကို
အဆိုပါ PVS800-xnumxb'n စျေးကွက်၏အသစ်တစ်ခုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏လွှတ်ပေးရန်နှင့်အတူ High-powered အလယ်ပိုင်းပြောင်းပြန်လှန်၏ ABB အလယ်ပိုင်းအင်ဗာတာ PVS800 အလွန်အမင်းအောင်မြင်တဲ့စီးရီး၎င်း၏ပြည့်စုံနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးအင်ဗာတာအစုစုကိုချဲ့ထွင်ရန်ဆက်လက်။ စီးရီး၏အောင်မြင်မှုကိုပြီးနောက် ABB အလယ်ပိုင်းအင်ဗာတာ PVS57, [ပို ... ]
ပျက်ဆီးနေသောကြောင့်ကိုလံဘီယာမီးရထားလိုင်းအတွက် Cerrejon ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်
ကိုလံဘီယာရဲ့ Cerrejon မီးရထားလမ်းကြောင့်ကိုလံဘီယာအကြီးဆုံးတင်ပို့ Cerrejon ကျောက်မီးသွေးမိုင်းနှင့်ဆိပ်ကမ်းများ၏ပေါက်ကွဲမှုမှထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့သည်ကြောင့်sağlayıncaရထားလမ်းများအကြားဆက်သွယ်မှုမှာပေါက်ကွဲမှုမှပျက်စီးခဲ့ပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာပြုပြင်ကြလိမ့်သတင်းပို့ခဲ့သည်။ ဤအပေါက်ကွဲမှု၏ကုမ္ပဏီသတင်းရပ်ကွက်များ [ပို ... ]
US မှာဝါရှင်တန်ကနေဘော့စတွန်မှ သွား. လျှင်မြန်စွာ Amtrak Acela Express ကိုခရီးသည်တင်မီးရထားတိုးကျော် 200 ကီလိုမီတာမေရီလန်းပြည်နယ်၌ဝေဖန်ခံခဲ့ရသည်။ ရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, ရထားအတွက်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအမှားမှယမန်နေ့ကလွှဲပြောင်းခံခဲ့ရသည် 06.40 နံနက်ယံ၌အရပျကိုလုယူသောအဖြစ်အပျက်များ၏အကြောင်းရင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ [ပို ... ]
အမေရိကန်အတွက်ခရီးသည်တင်ရထားကုန်တင်ရထားများပြားသေပြီ2116 ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်
အမေရိကန်အတွက်ကုန်တင်ရထား2ကလူဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရသူများ၏အရေအတွက် xnumx'y မှထခဲ့ကြသည်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်သောမတော်တဆထိခိုက်မှုအတွက်ခရီးသည်တင်ရထားတိုက်မှုရပ်ထား။ အဆိုပါ 116 ခုနှစ်တွင် Amtrak ခရီးသည်တင်မီးရထားကုမ္ပဏီ၏ခရီးသည်နှင့်အတူတောင်ကယ်ရိုလိုင်းနားအမေရိကန်ပြည်နယ် CSX နယူးယောက်ကနေမိုင်ယာမီသွား [ပို ... ]
လွှတ်တော်အမတ်များရထားမတော်တဆသေ 1,3ဒဏ်ရာရသူသယ်ဆောင် Make
အမေရိကန်အတွက်အမှိုက်သရိုက်ထရပ်ကားလူတွေဒဏ်ရာရ 1,3လူတွေကိုကြေငြာခဲ့သည်သေဆုံးခဲ့သည်သောယာဉ်မတော်တဆမှုအတွက်ရီပတ်ဘလစ်ကန်အထက်လွှတ်တော်အမတ်တင်ဆောင်တဲ့ရထားနဲ့တိုက်မိ။ ရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, ရထားအိမ်ထောင်ဖက်အထွက်အနောက်ဗာဂျီးနီးယားနှင့်အတူဝါရှင်တန်ကနေရီပတ်ဘလစ်ကန်အထက်လွှတ်တော်အမတ်တင်ဆောင်လာသောအနောက် [ပို ... ]